I-US Space Force ilandelela izinto ezincinci nge-Space Fence surarillionance radar - I-Ocean-Components.com
IkhayaIindabaI-US Space Force ilandelela izinto ezincinci nge-Space Fence surarillionance radar
Inkqubo le izakuba yeyona radar yokukhangela ithambile kwi-USA's Space Surveillance Network kwaye kuthiwa iyakwazi ukubona izinto ezincinci njengemabula. Ngokukodwa ukuphucula ukuchaneka kokubekwa esweni, ikwenzelwe ukunika ithuba lokuphendula ngokukhawuleza.
Endaweni yokulandela 'iimayile', nangona kunjalo, iya kusetyenziselwa ukufumana nokukhangela izinto ezijikelezayo ezinje ngeeshelfishi zorhwebo nezomkhosi, izixhobo zokuphakamisa amatye kunye nendawo yokulahla kumhlaba omncinci, ophakathi, kunye nomjikelo we-geosynchronous Earth.
Inkqubo esebenzisa i-Gallium Nitride (GaN) enead-based S-band esekwe kumhlaba wokuqala-yaphuhliswa ngu-Lockheed Martin ukusukela ngoJuni ka-2014. I "radical Fence" ikwindawo yesiQithi sase Kwajalein kwiRiphabhlikhi yaseMarshall Islands , kwiPasifiki (emantla empuma yePapua New Guinea, emazantsi entshona yeHawaii).
Emfanekisweni apha ngasentla nguBrigadier General DeAnna Burt, UMlawuli weeMisebenzi kunye noNxibelelwano, Umbutho wamanqanaba wase-United States, echaza ngokusemthethweni ukwamkelwa kwale nkqubo.
“Isikhala seFeni siguqula indlela esijonga ngayo indawo ngokubonelela ngedatha efanelekileyo nangokuchanekileyo yedatha kwizinto ezisongelayo zombane ezingenamntu nezingalwenziswanga iimpahla zentengiso,” utshilo u-General Wenqola Yezomkhosi u-John W. "Jay" Raymond, inkosi yokuqala yokusebenza kwendawo kwi-US Space Force esandula ukwenziwa.
"Amandla ethu esithuba abaluleke kakhulu kukhuseleko lwethu kuzwelonke kunye nendlela yobomi, yiyo loo nto ke kufuneka ukuba ucingo lweFence Fence lubonelele ukukhulisa amandla ethu okuchonga, ukujonga nokulandela umkhondo kwezoyikiso kwezi nkqubo."
Ngaphambi kwendawo yokubiyela, i-Space Surveillance Network ilandelela izinto ezingaphezu kwama-26,000, utsho emkhosini, ngoku kulindeleke ukuba unyuke kakhulu.
I-Space Fence iya kuqhutywa yi-20 Space Space Squadron (i-SPCS) kwi-Space Fence Operation Centre eHuntsville, e-Alabama. Emva koko, ibonelela ngedatha kwi-18 SPCS ebekwe kwiVandenberg Air Force Base, California, esebenzisa idatha ukunceda ukugcina ikhathalogu yento yesithuba kunye neesethelthi zesikrini ezisebenzayo, zombini zinokusebenziseka kwaye zingashukumi.
UGeneral Raymond uxele ukusayinwa kwi-twitter:
Isithuba seSithuba siyiOps eyamkelwe ngokusemthethweni & IOC! Umsebenzi omkhulu weqela w / amaqabane ethu @LockheedMartin @AF_SMC @PeteAFB ukufezekisa lo msebenzi ubalulekileyo. Isithuba seSithuba sibonelela ngoLwazi oluphuculweyo lwe- #Space Domain ye- https://t.co/qUDKZL4AX7
-Gen Jay Raymond (@SpaceForceCSO) Ngomhla wamashumi amabini anesibhozo ku-Matshi 202020
U-Lockheed Martin ubhale ngaphambili ngale projekthi:
Iindawo kunye nokuhamba kwamagagasi okuphakama kwendawo entsha ye-Fence Fence kuya kuvumela ukufunyanwa kwe microsatellites encinci kunye nenkunkuma kuneenkqubo zangoku. Ukongeza, uyilo lweFenceheed Martin's Space Fence luya kuphucula kakhulu ixesha elifanelekileyo apho abaqhubi banokwazi ukubona imisitho yendawo, enokuthi ibeke isoyikiso kwi-satellite yeGPS okanye kwiSitishi seNdawo yeHlabathi. Ukuguquguquka kunye novakalelo lwenkqubo kuya kubonelela ngokugubungela indawo enzulu ye-geosynchronous orbits ngelixa kugcinwe ucingo lokujonga.
Kwaye, ubhala kwikona yeGaN, uthe:
"Ezi ziphumo zovavanyo zibonisa isiphelo seminyaka elingaphezulu kweshumi yotyalo-mali ekwabelwana ngalo kubuchwephesha beGaN," utshilo uSteve Bruce, usekela-mongameli, Iinkqubo eziPhambiliweyo kwiiNkqubo kunye noQeqesho lweLutheed Martin. "I-GaN HPAs ibonelela ngokubalulekileyo kwiisistim zerhasi ezisebenza ngokufana neFence Fence, kubandakanya nokuxineka kwamandla ombane, ukusebenza ngokukuko kunye nokuphucuka okuthembakeleyo kubuchwephesha bangaphambili."
Unokufunda ngakumbi kwiwebhusayithi yenkampani.
Bona kwakho: I-USA ifunga kwiNtloko yokuQala yoMkhosi osandula ukwenziwa